တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင်က တံခါးလာခေါက်နေပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ရဲ့အသံတော်ကို သင် မှတ်မိနိုင်ပါသလား (၁) (အပိုင်း၄/၅) | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
မျှဝေရန် 210 ရုပ်ရှင်အပြည့်အစုံကြည့်ပါ
(ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) သခင်ယေရှုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသေချာနိုင်မလဲ - အပိုင်း (၂) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင်က တံခါးလာခေါက်နေပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ရဲ့အသံတော်ကို သင် မှတ်မိနိုင်ပါသလား (၂) (အပိုင်း၅/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင်က တံခါးလာခေါက်နေပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ရဲ့အသံတော်ကို သင် မှတ်မိနိုင်ပါသလား (၁) (အပိုင်း၄/၅) စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၇ - အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော နှစ်ပေါင်း ၆ဝဝဝ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ်ပြခဲ့သည် စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၆ - ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်မလဲ? (၂) စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၅ - ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်မလဲ? (၁) ဇာတ်လမ်းတို ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ သမ္မာတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကြား ကွဲပြားခြားနားမှု
အသားပေးထားသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုများ 1242
"ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကို နားထောင်ကြ၏" လို့ သခင်ယေရှုက ပြောခဲ့ပါတယ် (ရှင်ယောဟန် ၁၀:၂၇)။ ကိုယ်တော်ရှင်က ပြန်လည်ကြွရောက်တဲ့အခါ သူ့သိုးတွေကို ရှာဖွေမယ်လို့ မိန့်ဆိုနေတာဖြစ်မှန်း သိသာထင်ရှားပါတယ်။ ကိုယ်တော်ရှင် ကြွရောက်ခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ အရေးကြီးဆုံးလုပ်ဆောင်ရမှာက ကိုယ်တော်ရဲ့အသံတော်ကို ကြားရအောင် ကြိုးစားဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တော်ရဲ့အသံတော်ကို ဘယ်လိုမှတ်မိနိုင်မှာလဲ။ ဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်နဲ့ လူသားတွေရဲ့အသံကြားမှာ ဘယ်လိုခြားနားချက်ရှိလဲ။
(ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) ဘုရားသခင်ကသာ တရားစီရင်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်တယ် ၄
(ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းသည် မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ရသနည်း။ - အပိုင်း (၆)